China MWA Planet Reducer HA-090 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Ihe adabako
Na reducer ụwa
Nduzi aka ike
Ekweghị ekwe Gear
Okwesiri ime eze
4000 pm rpm）
1. Ha usoro mbara reducer adopts cross ala agba, nke nwere àgwà nke elu kpọmkwem, elu rigidity na nnukwu amị ikike; amị oge bụ ọtụtụ ugboro nke miri uzo bọl amị; n'otu oge ahụ, a na-eji ihe a amata mmepụta nke ma osisi na diski nke onye na-ebelata, na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ iji ma dochie.
2. Ha usoro mbara ụwa reducer adopts okirikiri gia mgbanaka na site gia Ọdịdị adopts German Vera akụrụngwa shaping technology hazie esịtidem gia. Nhazi ya dị elu karịa teknụzụ na-emepụta ọdịnala ọdịnala, nkwekọrịta ngwaahịa ahụ dịkwa mma.
3. A na-arụ ọrụ nke mbara ala ndị e ji mee ihe na usoro ihe ntanetị dị na Ha site na ịtinye na usoro ntụgharị nke ngwa Vera si na Germany, nke nwere oke nkenke; a na-eme ka ịdị elu nke ihe mgbatị dị na 900HV site na iji teknụzụ ion nitriding dị elu, nke na-eme ka ngwaahịa ndị ahụ nwee nnukwu ọrụ ndụ.
4. Ha usoro reducer e mere na gburugburu gia. Ngwongwo ahụ na-adị nro mgbe ọ gbasịrị ngụkọta oge site na ngwanrọ ngwanrọ mbara igwe nke Japan, ma nwee njirimara nke mkpọtụ dị ala, mgbatị dị elu na obere ndozi.
5. Ihe ntinye ntinye na ngwaọrụ clamping nke usoro HA nke ụwa na-eme ka ihe jikọrọ iji hụ na ike nkedo kachasị na-arụ ọrụ na moto moto na nnyefe ziri ezi nke onye reducer bụ njehie efu na ọsọ ọsọ ọsọ.
Previous: MWA Planucucuc HA-060
Next: MWA Planucucucer HA-115
Inline Planet Gear Reducer
Ntinye ego na mbara ala
Mbara ala Speeducer
Ikike nri ala n'akụkụ aka nri